ट्याक्सीमा सामान हराउने तथा छोडिने क्रम बढ्दो - Pokhara News
अच्युत रेग्मी. पोखरा न्यूज – १२, असार । पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीमा सामान छोडिने तथा हराउने क्रम बढ्दो छ ।
विसं २०७५ मङ्सिर ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि मण्डिखाटार जाने क्रममा बा १ ज ५४२८ नम्बरको ट्याक्सीमा दुई थान हिराको औँठी र अन्य सामग्री छोडिएकोमा मङ्सिर १० गते ट्राफिक प्रहरीले खोजतलास गरी सामानको धनी मोनिका शाहलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले ट्याक्सीमा छोडिएको वा हराएको यात्रुको सामान सिसी क्यामरामार्फत पत्ता लगाएर सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाउँदै आएको जानकारी दिए । “कतिपय चालकले सामान इमान्दारिताका साथ सम्बन्धित धनीलाई बुझाउन महाशाखामा आउँछन् भने कतिपय चालकले नदिने गरेका छन्, जसलाई महाशाखाले कारवाहीसमेत गर्दै आएको छ”, उनले भने । उपत्यकामा सिसीटिभीको जडान भएकै कारण सवारीसम्बन्धी धेरै घटना पत्ता लगाउन सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।
कुनै पनि यात्रुको छोडिएको सामान बदनीयतपूर्वक नदिएमा त्यस्ता चालकलाई एक हप्तादेखि एक महीनासम्म महाशाखामा तारेख धाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, महाशाखाले ५४ सवारीसाधन फेला पारे पनि सवारी साधनमा सामान नभेटिएको बताएको छ भने १०३ चालकमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । महाशाखाले चालू आर्थिक वर्षमा ट्याक्सीमा खोजतलास गरी रु एक करोड ४९ लाख ३२ हजार ७०० मूल्य बराबरको नगद र सामानसम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ ।
“उपत्यकामा ट्याक्सी चलाउने सबै चालकले सामान छुटेका यात्रुलाई सामान फिर्ता गरी उपहार लिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ”, उनले भने । सामान फिर्ता नगर्ने चालकलाई सङ्घले कारवाहीसमेत गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १० हजारभन्दा बढी ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेका छन् ।
चिसोको कारण परीक्षामा लेख्न नसकेर रोए विद्यार्थी !
भारी हिमपातका कारण यातायात र हवाई उडान ठप्प, जनजीवन कष्टकर
तनहुँमा स्वास्थ्य चौकी भवन उद्घाटन